Erling Haaland Oo Magacaabay Kooxda Ugu Wanaagsan Dunida - Maaha Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, Juventus & Man City - Gool24.Net
Erling Haaland Oo Magacaabay Kooxda Ugu Wanaagsan Dunida – Maaha Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, Juventus & Man City
October 16, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Weeraryahanka da’da yar ee Erling Haaland ayaa magacaabay kooxda ugu wanaagsan waqtigan xilli uu duubayay filim documentry ah, kaas oo uu kusoo bandhigay waxyaabo badan.
Haaland oo wacdaro ka dhigay tartanka Champions League ee xili ciyaareedkii hore oo uu labada kooxood ee RB Salzburg iyo Borussia Dortmund u kala ciyaaray, waxa kale oo uu kooxda reer Germany ka caawiyey inay diyaarsadaan booskooda Champions League ee xili ciyaareedkan iyadoo waqtigii uu ku biiray bishii January na ahayd koox liidata oo meel hoose ku jirtay.
Sida ka muuqata muuqaalka filimkan, Erling Haaland ayaa u magacaabay kooxda dunida ugu wanaagsan waqtigan Liverpool oo xili ciyaareedkii hore ku guuleysatay horyaalka Premier League, isagana ay iskaga hor yimaaddeen wareeggii groups-ka ee Champions League xilligii uu joogay Salzburg.
20 jirkan oo ka hadlayay kooxda ugu fiican, haysata jamaahiirta iyo garoonka fiican ayaa waxa uu yidhi: “Liverpool ayaa ah kooxda ugu wanaagsan dunida. Waxay haysataa Jamaahiir aad u wanaagsan, garoon, cimilo cajiib ah iyo wax kasta.”
Muuqaalkan oo la duubay xilligii ay kooxdiisii hore ee RB Salzburg ay ku ciyaartay Anfield ayaa intaa ku daray: “Aniga riyo rumowday ayay ii tahay inaan ka ciyaaro halkan.”
Kulanka ka dhacay Anfield oo uu Haaland shabaqa soo taabtay, waxa kooxdiisa lagaga badiyey 4-3, hase yeeshee waxa uu da’yarkani ahaa mid bandhig cajiib ahaa muujiyey.
Bilo yar kaddib markii uu Borussia Dortmund kusoo biiray, waxa uu xili ciyaareedka hore ku dhamaystay 13 gool oo horyaalka Bundesliga uu ka dhaliyey 15 ciyaarood oo kaliya oo uu saftay.